Muranka Dhuxusha & Maamul U Sameynta Kismaayo Oo Meel Adag Maraya (Warbixin) – SBC
Muranka Dhuxusha & Maamul U Sameynta Kismaayo Oo Meel Adag Maraya (Warbixin)
Posted by Webmaster on Noofember 14, 2012 Comments
Marka la eego arimaha la xiriira Gobolada Juboyinka dalka soomaaliya waa dood adag oo meel walba looga doodayo,waxaana arinamaha ugu badan ee diirada la saaray ka mid ah maamul u sameynta kismaayo iyo cida iska leh,waxaana marar badan soo laabtay doodaha arintaasi la xiriira dawlada Somaliya ayaa dhawaan wafdi ay u dirtay kismaayo waxa ay si carro leh ugu soo noqdeen magalada Muqdisho iyaga oo aan la kulmin maamulka ka jira kismaayo.
Shirar kala duwan oo ka dhacay gudaha dalka iyo dibadiisa ayaa waxaa lagu taageeray in kismayo loo sameyo maamul ay dadka gudaha soo dhiseen,waxaana arintaasi ka biyo diiday xafiiska madaxweyaha dalka oo u arka arimaha maamul u sameyta kismaayo mid ay ka go’antahay dawlada soomaliya.
Saluugmada shacabka soomaaliyeed uu ka muujiyay cida sida rasmiga ah ay u hoos timaado kismayo ayaa waxaa uu dhaliyay shirar ka kala dhacay magaaloyinka nairobi iyo London oo looga hadlaayo maamul u sameyta juboyinka,waxaana marar kala duwan hadalo is qilaafsan kasoo kala baxen madax ka kala tirsan Somaliya iyo kenya.
Dhawaan danjiraha Somaliya ee dalka kenya Maxmed Cali Americo ayaa waxaa uu shir ku qabtay nairobi uu ku sheegay arimaha Kismayo kuwo dawlada soomaaliya ay ka go’antahay sidii maamul loogu sameyn lahaa,waxaana uu intaasi raaciyay in dawlada somaliya ay dhawaan maamul kaga dhawaqeyso Guud ahaan gobolada juboyinka waxaana arintaasi si deg deg ah uga jawaabay gudomiye ku xigeenka Barlamanka kenya Faarax maclin oo hadalkaasi ku tilmaamay in la iska yiri.
Mudane Faarax ayaa sheegay in shacabka ku dhaqan Juboyinka looga baahana yahay in ay sameyaan wixii karaankoda ah oo ay ku horumarinyan gobolada Juboyinka talada juboyinkana ay u taalo sidii ay maamul ugu sameyn lahaayen,ubucda muranka ayaa ah magalada Kismaayo oo dhinacyadan u arkaan in ay tahay meel safka hore uga jirta halgankooda maamul sameynta Kismayo.
Ciidamada Kenya oo ku socda magaca Amisom ayaa waxaa ay taageerayen Maleeshiyo somali ah oo markii danbe ay u suurtowday in ay gacanta ku dhigaan kismayo oo muddo sanado ah ay maamulayen xarakada Shabab,waxaana arintani ay dhalisay halgan adag oo loogu jiro maamulida Kismayo,Dawlada somaliya ayaa hada waxaa ay wadaa qorsheheedi ugu danbeyay ee Maamul u sameynta Kismayo oo ay la kaashaneyso Dadka shacabka ah ee ku nool gobolada juboyinka.
geesta kalena waxaa Jira muran labaad oo ka jira isla dakkada Kismayo oo ah Dhuxul aad u farabadan oo la sheegay in ay ku keydsan tahay dekada magalada kismaayo,taasi oo ay dawlada soomaliya diiday in la dhoofiyo,warsaxaafadeed ka soo baxay dawlada soomaliya ayaa lagu yiri sidan.
Dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ku celinaysa in la mamnuucay dhoofinta dhuxusha, iyadoo u hoggaansameysa qaraar ka soo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo lagu boorriyay dowladda inay ka hor tagto tallaabo kasta oo lagu doonayo in lagu dhoofiyo dhuxusha, maadaama dhoofinta dhuxusha ay halis ku tahay deegaanka.
Sidaa daraadeed, waxay dowladdu walaac qoto-dheer ka muujinaysaa cid kasta oo ku xadgudubta qaraarka Golaha Ammaanka ee mamnuucaya dhoofinta dhuxusha, waxayna qaadi doontaa tallaabooyin ay ku xoojinayso sidii looga hortegi lahaa ku xadgudubka sharciga mamnuucaya dhoofinta dhuxusha.
Dowladda federaalku waxay mahad ballaaran u jeedinaysaa guushii ay ciidamada Midowga Afrika ka gaareen gacan ku dhigista magaalada Kismaayo, waxayna sidoo kale hoggaamiyeyaasha ka soo jeeda magaalada Kismaayo ku boorrineysaa inay muranka siyaasadeed ee u dhaxeeya iyo danahooda gaarka ah ay ka hor mariyaan midda guud si loo hubiyo adkeynta ammaanka iyo soo celinta kalsoonida shacabka.
Dowladda Soomaaliya waxay meel cad ka taagan tahay in dekedda Kismaayo iyo garoonka diyaaradaha ay yihiin kuwo u furan, dadka Kismaayo, isla markaana fududeynaya sidii shacabka loo gaarsiin lahaa gargaarka bini’aadannimo, iyadoo dowladda ay ku boorrinayso ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda inay sii wadaan howsha ay ku sugayaan ammaanka ilaa iyo inta laga dhisayo maamul kumeel gaar ah.
Waa mid iska cad in dadka deegaanka ay khaatiyaan ka taagan yihiin jahawareerka siyaasadeed, hoggaamiye kooxeedyada iyo kuwa mayalka adag, balse ay u baahan yihiin ammaan, xasilooni, helista waxyaabaha daruuriga ah iyo mustaqbal wanaagsan, sidaas daraadeed dhuxusha hadda ku xareysan dekedda Kismaayo waxay ku jiri doonaan meesheeda inta ay dowladdu go’aan ka soo saareyso.
Dowladda Soomaaliya waxaa ka go’an inay u hoggaansanto qaraarka Golaha Ammaanka ee tiriskiisu uu yahay 2036 waxayna soo jeedinaysaa in la adkeeyo mamnuucista dhoofinta dhuxusha, waxayna diyaar u tahay inay gurmad u fidiso dadka magaalada Kismaayo iyadoo qaadeysa tallaabooyin ay isugu dubba-rideyso sidii gargaar halkaas loo gaarsiin lahaa, isla markaana ay hadda waddo qorshe markab gargaar sida loogu dirilahaa shacabka Kismaayo.
Marka laga soo tago warsaxaafadeedkan ayaa waxaa geesta kale jira halgan balaadhan oo ay wadaan dhinacyada leh dhuxusha dakada taal,waxaana wararka aan ka heleyno Kismayo ay shegayan in dhawaan wafdi ka socda dawlada somaliya oo kala ahaa wasiirki hore ee difaaca somaliya iyo taliyaha ciidamada Milatariga somaliya oo dhawaan kismayo tagay ay dood adag kala hor yimaadeen dadka iska leh dhuxusha muddada dheer ku jirta Dakada waxaana ilaa iyo imika aan jirin hadal cad oo laga soo saaray dhuxushaasi.
Denjire Cali Ameriko oo dawlada soomaliya u jooga dalka kenya ayaa waxaa dhiniciisa dhawaan sheegay in dawlada ay sameysay gudi balaadhan oo soo baara arimaha dhuxusha kaasi oo la kulmi doona Madaxweynaha somaliya xasan sheekh iyo dhinacyada kale ee masuulka ka ah dhuxusha kismayo taala,waxaana uu si cad u sheegay in talada ka soo baxda arintaasi ay noqon doonto mida kama danbeysta ah.
Golaha odayaasha Juboyinka oo kulamo kala duwan ku yeeshay Gobolada Juboyinka iyo Magalada Nairobi ayaa waxaa ay baaq u direen madaxweyaha dawlada somaliya oo u sheegen in loo bahan yahay si deg deg ah in loo dhoofiyo dhuxushaas oo qarash badan uu ka galay ganacsato balse hada ka dib laga digo in la soo jaro dhuxul cusub oo deeganka wax yeesha.
Ugu danbeytiina Hawsha la xiriirta kismayo ayaa waxaa ay caqabad weyn ku noqotay dawlada somaliya ee muddada kooban jirta waxaana durba madaxweynaha somaliya xasan sheekh uu helaaya su’aalo la xiriira cida sida tooska ah u maamusha kismaayo iyo sababaha dawlada somaliya uga gaabsaneyso in ay si toos ah uga hadasho arimaha kismayo oo dhamaan shacabka soomalida xiligan isha ku hayaan ka bixitaankii alshabaab ka dib.